FMI Malagasy : « Sazio ny kandida mahazo vato latsaky 10 % » | déliremadagascar
/ Sékré détà
/ Marikoditra /
TAHAM-PAMOKARANA VARY: Ny tarehimarika niavaka
ONIVERSITE AZO ANTOKA: Isaky ny diplaoma amin’ny lalam-piofanana ny fankatoavana
GOVERNEMANTA VAOVAO: Ho sarotra ny asa
IMBIKI HERILAZA: “Mila vahoaka mpisintona lakolosy isika”
RESULTATS OFFICIELS DU SECOND TOUR DE LA HCC: « Tendance et provisoire », confirmés
VOEUX D’IAVOLOHA: Absence du PM Ntsay et du clan Rajoelina
FMI Malagasy : « Sazio ny kandida mahazo vato latsaky 10 % »
politique	 11 mai 2018 R Nirina
Tokony ho fantarina ny loharanom-bolan’ny kandida hilatsaka ho fidiana filoham-pirenena. « Izay kandida mahazo vato latsaky ny 10 %, tokony ho saziana handoa lamandy 100 tapitrisa Ariary. Raha tsy voaloany izany dia gadraina ». Tokony ho jerena akaiky ny loharanom-bolan’ny kandida tsirairay. Ho hita eo raha mahaloa ny lamandy ireo tsy mahazo vato mihoatra 10 %. Amin’izao fotoana izay ho tratra eo ireo olona karamaina ho kandida fotsiny.
Tsy manaiky ny fanatanterahana ny fifidianana mialoha ny fotoana ny fikambanana fahefa-mividy no ilain’ny Malagasy (FMI). Nanondro daty telo ny vaomiera mahaleotena misahana ny fifidianana (CENI) momba ny fifidianana filoham-pirenena. Raha hampandroso ny datim-pifidianana filoham-pirenena, ny 29 aogositra 2018 no tolo-kevitra nomen’ny CENI. Nambaran’ny filohan’ny FMI Malagasy, Jean-Jacques Ratsietison fa antomotra loatra raha amin’io daty io fa aleo tazomina ny 24 novambra 2018 ny fihodinana voalohany amin’ny fifidianana filohan’ny repoblika Malagasy.
Eo amin’ny fampahafantarana ny vinan’asan’ny kandida mbola tsy be mpahafantatra no olana raha aroso aloha ny fifidianana. « Ny kandida efa be mpahafantatra ihany no hahazo tombony raha toa ka ho tanterahina ny 29 aogositra 2018 ny fifidianana. Tsy ho ampy ny fotoana hampielezana ny vinan’ireo kandida vaovao na ireo vao handray anjara amin’ny fifidianana filoham-pirenena », hoy i Jean-Jacques Ratsietison. Ankoatra izany, tokony mbola faritana mazava ny lalàm-pifidianana. Araka ny fanehoan-kevitra nataony dia tokony hampidirina ao antin’ny lalàm-pifidianana ihany famerana ny vola ampisain’ny kandida mandritra ny fampielezan-kevitra. Amin’izay fotoana izay, ny vinan’asa no hifaninana fa tsy ny vola.
TAHAM-PAMOKARANA VARY: Ny tarehimarika n...
ONIVERSITE AZO ANTOKA: Isaky ny diplaoma...
IMBIKI HERILAZA: “Mila vahoaka mpisint...
RESULTATS OFFICIELS DU SECOND TOUR DE LA...
VOEUX D’IAVOLOHA: Absence du PM Ntsay ...
MARC RAVALOMANANA « La vérité, rien ...
KAOMININA AMPITATAFIKA: Ny mampandeha ny...
ADILAHY POLITIKA : Tsy ankivoaka ny Teni...
MALAGASY ANY FRANTSA SY ERAOPA: Miankina...
TAHAM-PAMOKARANA VARY: Ny tarehimarika niavaka 18 janvier 2019
ONIVERSITE AZO ANTOKA: Isaky ny diplaoma amin’ny lalam-piofanana ny fankatoavana 16 janvier 2019
GOVERNEMANTA VAOVAO: Ho sarotra ny asa 11 janvier 2019
IMBIKI HERILAZA: “Mila vahoaka mpisintona lakolosy isika” 11 janvier 2019
RESULTATS OFFICIELS DU SECOND TOUR DE LA HCC: « Tendance et provisoire », confirmés 9 janvier 2019
VOEUX D’IAVOLOHA: Absence du PM Ntsay et du clan Rajoelina 8 janvier 2019
MARC RAVALOMANANA « La vérité, rien que la vérité ! » 8 janvier 2019
Lova Rajason dans Prince Rev. Dr. Ndriana Rabarioelina : « …MANAMELOKA IREO NAHAVANON-DOZA ARY MISAONA NY FIRENENA … » :
TRANSPARENCY INTERNATIONAL : Nandrombaka loka ny ekipan’ny Olondia | déliremadagascar dans KAOMININA IVATO: Niditra tamin’ny kitapom-bola ny 70 % ny teti-bola 2017.
William Randrianantenaina dans ONG NY FANAHY MAHA-OLONA : Soso-kevitra ho an’ny bèn’ny tanana sy ny fanjakana.
RAMANOVONTSOA BONI ARMEL dans FOIRE INTERNATIONALE DES PIERRES BRUTES : Nampiavaka ny foara ny trano heva 16 an’ireo mpandraharaha Malagasy
mikas dans FILOHA HERY RAJAONARIMAMPIANINA: “Fanitsiana no atao fa tsy fanovana lalam-panorenana”.